Hagaha Socdaalka Xalaasha ee Xalaasha - Makhaayadaha - Masaajidyada - Hoteelada Saaxiibtinimada Muslimiinta
Xebroon (Carabi: الخليل al-Ḫalīl; Cibraaniga: חֶבְרוֹן Ronevron, Ḇeḇrôn, ama Cibraan) waa magaalo qadiim ah koonfurta Bankiga Galbeedka. Waa meeshii lagu aasi jiray awoowayaasha kitaabiga ah ee Ibraahim, Isxaaq, Yacquub, iyo haweenkooda. Tani waxay ka dhigeysaa goob diimeed muhiim u ah diimaha Ibraahim. Sanadkii 2017, magaaladii hore waxaa lagu qoray UNESCO Liiska Dhaxalka Adduunka.
Xebroon waxaa lagu sheegay Kitaabka Qudduuska inuu yahay gurigii Ibraahim, iyo meeshii lagu aasay isaga iyo dhowr fac oo qoyskiisa ah. Waqtigii Boqor Daauud, Xebroon waxay muddo kooban ahayd caasimaddii dawladda Israa’iil, ka hor intaan caasimaddu u guurin magaalada Qudus. Maanta, Xebroon waxay muqaddas u tahay Muslimiinta iyo Yuhuudda labadaba sababtoo ah xiriirkii ay la lahayd Ibraahim. (Masiixiyaddu sidoo kale waa diin Abraham ah, laakiin Masiixiyiintu ma fiirin sida ugu badan ee Xebroon.)
Dadkii Yahuudda ahaa ee reer Hebron waa la daad gureeyay kadib markii Carabtu dileen ku dhowaad 70 ka mid ah sanadkii 1929. Dagaalkii 1967 kadib, in yar oo Yuhuud ah ayaa dib u dejin u sameeyay xaafadda Yuhuudda. Maanta, ku dhowaad 500 oo Yuhuud ah ayaa ku nool qayb ka mid ah magaalada qadiimiga ah ee Hebron iyada oo ay si joogto ah u ilaalinayaan Ciidanka Difaaca Israa’iil, isla markaana ay qayb ka yihiin afar askari oo Israa’iili ah degsi kasta oo reer Israel ah.
Khariidada siyaasadeed ee Xebroon
Maanta, magaalada Xebroon waxaa ku nool ilaa 500 oo Yuhuud ah iyo 200,000 oo Falastiiniyiin ah. Dejinta Yuhuudda ee Kiryat Arba (tirada dadka ku nool 8,000) waa magaalo gaar ah oo isla markiiba ku dhow Xebroon. Xebroon waxay u qaybsan tahay laba qaybood: H1 gebi ahaanba waa falastiin waxaana ku jira ku dhowaad 80% dadka magaalada deggan, halka H2 ay ku jiraan Yuhuudda oo dhan iyo inta ka hadhay Carabta. H1 wuxuu ku jiraa gacanta buuxda ee Falastiin (ie Aagga A), halka H2 ay Israel si buuxda gacanta ugu hayso. Godka Awoowayaasha, oo ah meesha ugu weyn ee barakaysan ee magaalada ku taal, wuxuu ku yaal xadka u dhexeeya H1 iyo H2.
Tani waxay ka mid ahayd meelaha ugu da 'da yar ee u dhexeeya Yuhuudda iyo Falastiiniyiinta, maaddaama Xebroon labada dhinac ee halkan ku yaal ay u muuqdaan kuwo ka sii daran oo ka rabshad badan celceliska kooxaha qowmiyadeed. Yuhuudda halkan joogtaa waxay maskaxdooda ku hayaan xasuuqii 1929, halka Falastiiniyiintana ay qabaan xasuuqii Baruch Goldstein ee 1994 ee uu ku tukaday muslimiin tooda. Tani maahan meel wanaagsan oo lagu muujiyo aragtidaada ku aadan khilaafka Israa’iil / Falastiin. Xitaa xitaa dadka Yuhuuda ah ee halkan dagan waxay xiriir cadawtinimo badan la leeyihiin ciidanka Israel, maxaa yeelay waxay u arkaan inay tahay mid aad ula qabsan karta Falastiiniyiinta. Nasiib darrose, ku dhawaaqistii magaalada Old ee sanadkii 2017-kii inay tahay goob dhaxalka adduunka ah ee UNESCO wax yar bay ka qaboojisay xiisadaha, maaddaama dowladda Israa’iil ay ka mudaaharaaday kala soocideeda inay tahay "Falastiin" goob "khatar ku jirta", in kasta oo ay dhaxal u leedahay Yuhuudda.
Ka tag Yeruusaalem - Ka raac bas 381 ama 383 CBS (₪ 8.10) dhanka Yahuudda ee Xebroon. Joogsiga ugu dambeeya wuxuu ku yaal horta Godka Awoowayaasha dhanka Yahuudda.
Laga soo bilaabo Be'er Sheva - Ka raac bas 254 (₪ 13.50), oo ku eg meesha ay Yuhuuddu degto ee Kiryat Arba, halkaas oo aad uga raaci karto 381 ama 383 dhanka Yahuudda ee Xebroon. Wareejintani waxay noqon kartaa bilaash haddii aad tustid baska 254-ka tigidhada.
Ka tag Yeruusaalem - Ka raac baska 21 saldhigga basaska ee Suldaan Suleymaan oo ka baxa midigta iyo bidix dhinaca bidix ee Dimishiq. U sheeg Hebron ama Al-Khaliil (Carabi). Waxay kuu kaxayn doonaan barta dhexe ee barta basaska ee Beytlaxam. Halkaas, ka tag dabaqa hoose ee istaanka basaska Beytlaxam halkaas oo adeegyo laga bixiyo (nooca Falastiin ee a xashiish, loo yaqaan a adeegee Carabi ahaan) ayaa kuu geyn doonta Xebroon wax ka yar ₪ 10.
Haddii kale, baska raac Abu Dis oo u sheeg darawalka baska inaad aadeyso Khaliil.
Laga soo bilaabo Beytlaxam - Sidaan hore u soo sheegnay, laga bilaabo sagxadda hoose ee istaanka basaska Beytlaxam (oo ku taal Manger Street) adeege ayaa kuugu geyn doona Xebroon ₪ 9.
Laga soo bilaabo Ramallah - Tooska ah ee loo maro Hebron ayaa ka tagta mid ka mid ah saldhigyada basaska badan ee Ramallah, kaliya weydii agagaarka. Way ka dhakhso badan tahay inaad marka hore tagto Beytlaxam, in kastoo.
Laga soo bilaabo Be'er Sheva - Jidkaaga u maro joogsiga ugu dambeeya ee ka soo horjeedka Kaniisadda Aabbayaasha dhinaca Yuhuudda, sidii hore loo sharraxay. Halkaas uun ka sii lugee adigoo sii maraya ugu yaraan saddex baro kontorool oo Israa’iil leedahay, oo leh isbaaro ugu dambeysay ahaanshaha irrid kaa "kuu dhiibaysa" dhinaca Falastiin. Haddii kale, waxaad toos uga geli kartaa dhinaca Falastiin adoo maraya a albaabka bidix ee laga galo muslinka kaniisadda Awoowayaasha, intaas kadib si kastaba ha noqotee waxaad u baahan doontaa inaad ku marto luuq dheer oo aad u niyad jab badan.
Sidoo kale, imanaya Kiryat Arba, waxaad si toos ah ugu socon kartaa qaybta Falastiin ee Xebroon - kala tasho khariidadaha Google sida ugu wanaagsan. Si kastaba ha noqotee, raacitaanka gaaban ee baska loo yaqaan 'Egged bus' ayaa laga yaabaa inuu kuugu habboon yahay imaatinka halkan markii ugu horreysay.
Ka gudubka dhinacyada
Waxaa jira ugu yaraan laba irdood oo u oggolaanaya marinka lugta ah ee u dhexeeya Falastiin iyo Yahuudda dhinaceeda.
Waxaa jira khuraafaad ah in aysan suurtagal ahayn in laga soo galo dhinaca Yuhuudda ee Xebroon lugaynaysa jidka weyn / wadada weyn. Si kastaba ha noqotee, tani waxay u badan tahay inay run tahay oo keliya waqtiyada kacsan, maxaa yeelay ma jiraan albaabbo iyo qalabka wax lagu baaro oo lagaa hubin karo. (Guud ahaan, taksiilayaasha Falastiiniyiinta looma oggola inay u kaxeeyaan dhinaca Yuhuudda.) Xaaladdaas, waxaad u baahan doontaa inaad tagsi ama bas ka raacdo magaalada Israa’iil ama dejinta Yuhuudda (sida Kiryat Arba). Si kastaba ha noqotee, caalamku wuxuu u kaxeyn karaa dhinaca Yuhuudda, haddii darawalkaagu uusan ahayn Falastiini.
Waad ku lugeyn kartaa qaybta Falastiin ee Xebroon iyo halkaas oo aad uga tagi kartaa dhinaca Yuhuudda adigoo u maraya labada irdood midkood. Haddii aadan awoodin inaad ka tagto Kiryat Arba oo aad u tagto Godka Awoowayaasha adoo lugeynaya si toos ah, u soco dhinaca Falastiin ka dibna mari mid ka mid ah irdaha ka imanaya Be'er Sheva.
The Istaanka Basaska Xebroon loogu adeego oo laga soo galo aagagga ku xeeran, iyo xitaa Beytlaxam iyo Ramallah waxay ku yaalliin dabaqyada sare ee Xarunta wax-iibsiga Jeel-Saed ee ku teedsan Adel Street.
Dhinaca Falastiin ee Xebroon, tagaasida tagaasida magaalada gudaheeda waa inaysan ku kacin wax ka badan ₪ 10-15. Markaad aragto aragti ka baxsan magaalada, waxaa ugu wanaagsan inaad tagsi taksi ah ka qaadatid goobta adeegga-taksiga / saldhigga baska ama aad kala xaajooto darawal taksi qiimo jaban. Hubso inaad ku heshiiso qiimaha taksiga intaadan furin.
Dhinaca Yahuudda ee Xebroon, socod 10-daqiiqo ah ayaa kaa qaadi doona gees ilaa gees.
Godka Qabiilooyinka (al Haram al Ibrahimi / Ibrahimi Masjidka, Mac'at HaMachpelah / Godka Machpelah). Goobta ugu weyn ee diinta ku taal magaalada. Godka, halka ay ku aasan yihiin Awoowayaasha iyo xaasaskooda, waa dhul aad u qoto dheer. Hadda, dadku waxay ku tukadaan dhisme ku yaal dusha dusha sare, oo uu dhisay Boqor Herod qiyaastii 2000 sano ka hor. Dhismuhu wuxuu u qaybsan yahay qaybaha Muslimiinta iyo Yuhuudda. Soo-booqdayaasha waxaa lagu soo dhaweynayaa inay soo booqdaan labada dhinacba marka aan loo adeegsanin salaadda jadwalka ku jirta. Dhinaca muslimiintu wuxuu dumarka u siiyaa gogol ay ku qariyaan markay booqanayaan. Dhinaca muslimiintu wuxuu ka kooban yahay iridda kaliya ee la yaqaan ee laga galo Godka hoostiisa (waxaa lagu xiray albaab marmar ah), iyo sidoo kale astaamaha qabriga ee Isxaaq iyo Rebecca. Astaamaha qabuuraha ee Ibraahim iyo Saara waxay ku yaalliin soohdinta labada qaybood ee muslimiinta iyo Yuhuudda, halka qaybta Yuhuudda ay ku jiraan astaamaha qabriyada ee Yacquub iyo Lee'ah. Inta badan, dhismaha badhkiis waxaa loo isticmaalaa muslimka badhna salaadda Yuhuudda. Dhowr maalmood oo hore loo sii cayimay sannad kasta, diin waliba waxay adeegsanaysaa dhismaha oo dhan. Yuhuudda, ciidaha caadiga ah ka sakow, maalmahan waxa ka mid ah “Shabbat Chayei Sarah” dayr kasta, oo kumanaan dad ah oo ka socda dhammaan reer binu Israa'iil ay booqdaan Xebroon si loogu xuso iibsigii Ibraahim ee Godka ee milkiilayaashiisii ​​hore ee reer Xeed. Dadka muslimiinta ah, waxay u tahay jimcaha inta lagu jiro bisha Ramadaan, iyo inta lagu guda jiro Ciidul Fitriga iyo Ciidul Adxaa, xuska rabitaanka Ibraahim ee ah inuu allabaryo wiilkiisa. Godka Awoowayaasha waa a Liiska UNESCO ee Dhaxalka Dunida, iyo aqoonsiga la isku haysto ee aqoonsiga ayaa horseeday go'aankii Mareykanka iyo Israel ee 2017 ee ay uga baxeen UNESCO 31kii Diseembar 2018.
Beit Romano. Dhismaha Yeshiva oo la dhisay 1901. Ilaa 1980, Yuhuuddu waxay u isticmaali jireen yeshiva mar kale.
Tel Rumeida (Tel Xebroon) (oo ku xigta qabuuraha Yuhuudda). Meeshan qoditaankeeda qadiimiga ah waxay daaha ka rogtay burburka 4,500 sano jir derbi magaalo iyo jaranjaro. Dushiisa oo laga dhisay dhisme dabaqyo ah oo ku taagan tiirarka. Dhismahan, sidoo kale Kormeerka Xebroon waa la heli karaa - ku kac jaranjarada gudaha dhismaha oo waxaan rajeynayaa in albaabka kore uusan xirnayn. Sida laga soo xigtay Ciidanka Israel ee degan, tani waa mid ka mid ah meelaha ugu xiisadda badan ee Hebron, maxaa yeelay guryaha Falastiiniyiinta iyo Yuhuudda ayaa la dhisay midig midba midka kale oo aan lahayn deyr ama derbi - waxaad ku ogaan doontaa calammada waaweyn ee kala duwan ee la dhejiyay laba guryo.
Qabriga Yishai (Jesse) iyo Ruth (u dhow Tel Hebron, raac calaamadaha). Tirooyinkan kitaabiga ahi waxay la xiriiraan King David. Goobta waxaa sidoo kale ku jira sinagog u ekeysiiya qarniyadii hore, oo loo dhisay qabuuraha halkan, iyo Gidaarka weyn .
Ceelka Ibraahim. Ceelka loo malaynayo inuu adeegsaday Ibraahim.
Geedka Oak ee Masqubiya / Maskobiya iyo Monastery (Ibraahim geedkii (sidoo kale geedkii Mamre)),. 09:00-12:30 & 13:30-17:00. Kaniisad 1000 sano jir ah iyo geed aad u weyn oo duug ah ayaa halkan laga heli karaa. Waxaa laga yaabaa inaad horay u wacdo maxaa yeelay inkasta oo waqtiyadu ay soo jeedinayaan inay ka duwan yihiin, kaniisaddu marwalba ma furnaan karto In kastoo, ugu yaraan uu jiro waardiye kaa furaya albaabka wadada weyn.
Masjidka Al Kawthar (agagaarka The geedkii Abraham Monastery). Masaajidka hortiisa derbi / kaniisad 1000 sano jir ah ayaa lagu qushuuci karaa - waxaa lagu qoday iyadoo laga caawinayo dowladda Ruushka.
Geedkii Abraham Monastery (Geedkii Mamre) (Hirbet oo ah Sibteh). Boggan barakaysan ee Masiixiyiintu waxay xusayaan booqashadii Ibraahim ee saddex malaa'igood.
Maxaa laga sameeyaa Xebroon
Meel ku wareeji, ka gudbo irdaha oo waxaad la kulantaa tusaalahan gaarka ah ee magaalo kala qaybsan. Kaliya kala-tagga iyo sida dadku ula macaamilaan, waa mid aad u xiiso badan in la arko.
Ku dhex socoshada Old Town / Suuqa (Souq) dhinaca Falastiin.
Eeg Xebroon oo isu beddelaysa magaalo cirfiid galabnimadii Jimcaha, markay tahay maalin ciid ah.
Fikrad fiican waa inaad kireysato mid ka mid ah dhalinyaro badan oo dhalinyaro ah (inta badan ragga) si ay kuu siiyaan booqasho - fadlan. Ku heshiiya qiimo macquul ah gacanta ka hor. In kastoo, safarro badan oo xirfadle ah ayaa lagu abaabuli karaa hoygaaga ama Yeruusaalem.
Wax ku iibsiga Magaalada Hore degmada magaalada (oo u dhow Masjidka Ibrahimi) Magaalada Xebroon ee Old City waa meel aad u fiican oo laga helo dukaamaysigaaga xusuusta ah ee Land Holy.
Warshadda Hebron iyo Ceramics (Wadada Ras al Jora ee waqooyiga magaalada). Iibinta muraayadaha la shubay iyo taarikada dhoobada ah, marmarka, qurxinta iyo qurxinta (sida kuwa lagu arkay suuqyada Yeruusaalem) oo ay Hebron caan ku tahay, qiimo aad u macquul ah. Dukaamada ku yaal Yeruusaalem waxay wax ka iibsadaan warshaddan, markaa way fiicantahay in la jaro ninka dhexe oo halkan laga iibsado. Warshadda, oo u oggolaanaysa dadka soo booqanaya inay arkaan sida loo sameeyo qurxinta quraaradaha, ayaa iyaduna mudan in la arko.
Warshaddii Hirbawi Kaafiyya (10 daqiiqo socod ah oo ka socda Xarunta Magaalada),. Warshaddii kaliya ee Kafiya (Caraf jeex jeex jeex ah) ay ku hartay Falastiin. Waxay sameeyaan kafiya aad u qurux badan oo midabbo kala duwan leh. inta udhaxeysa ₪ 15 iyo ₪ 30 waxay kuxirantahay sida wanaagsan ee aad wax u gadaneyso.
Haweenka jooga Xebroon iskaashatada, Suuqa St (Magaalada hore souq),. Waxay iibisaa xusuus-gacmeedyo gacmo-gacmeedyo kala duwan.
Ku soo iibso tabun (weyn, jilicsan, wareega) roodhida 'Bab il Zaweya' ka dibna soo qaado weel hummus ah oo kuu dhow adiguna waa lagu dejinayaa.
Falafel waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan "cunto fudud" guud ahaan Falastiin. Xebroon waxay leedahay makhaayado badan oo caan ah oo falafel ah oo had iyo jeer ku badan dadku falaafadooda dhadhanka leh. Soo qaado sandwich-kaaga ₪ 3 oo ku raaxayso.
Abu Sadee Falafel (geeska, 100 m oo ku socda wadada miraha iyo khudradda ee soo gala Magaalada Old). Nin da 'ah oo fiican oo ay tahay inuu halkaan joogay sannado badan. Fadhi ma leh
Falafel No. 2 (midig Abu Saadee kadib). Inbadan sida makhaayad iyo buuq.
Falafel Shorla, Wadada Ein Sarah (500 m gudaha Ein Sarah Street). Falafel weyn waxaadna dhigi kartaa salad adiga laftaada, yacnii inta la cuno intaad rabto.
Xebroon waxay caan ku tahay cunno dhaqameedkeeda loo yaqaan Al-Qidrah (Al-Khaliliyah). Cuntadani waxay ka kooban tahay inta badan bariis iyo hilib (digaag ama wan). Waa mid aad u macaan oo qurux badan, Al-Qidra waxaa badanaa la cunaa Jimcaha iyo ciidaha kale. Maaddaama ay u baahan tahay waqti in la diyaariyo oo ay tahay in lagu kariyo foornada qoryaha leh ee keega, ma sahlana in laga helo makhaayadda aan caadiga ahayn. Si kastaba ha noqotee, waxaa laga heli karaa makhaayadaha sida "Abu Mazen" iyo "Alquds" ee Ras el jora. Waxay ku noqon kartaa qaali muwaadiniinta maxalliga ah. Saxanka hal qof oo cabitaan ah ayaa ku kacaya ilaa ₪ 35.
Haddii aad tahay qof jecel macaan, ha moogaanin inaad xoogaa macmacaan ah ka hesho dukaamada macmacaanka badan ee ku xeeran Xebroon. Isku day kunafa / kenafeh (₪ 5 saxan joogto ah), Baqlawa, Harisah, Kolaj iyo liistada way sii dheeraan kartaa.
Halkee laga joogaa Xebroon
H2 hostel Xebroon (Hoteel ku yaal Xebroon), Fagaaraha Bab Al-Zawiya, Dabaqa 3 (Taagan isgoyska laba-laabka ah ee 20 mitir laga soo galo albaabka laga soo galo, marka la galayo dhinaca Falastiin ee Xebroon, si toos ah xagal / ka soo horjeedka dhismaha dhismaha salka ku yaal isgoyska waa dhismaha ay ku jiraan hoyga, halkaas oo dhinaceeda woqooyi-bari aad ka heli doontid albaabka laga galo Makhaayada al-Sa'ah dabaqa 3-aadna hoteelka (aamin aaminka GPS).),. Miisaaniyadda iyo xulashada ku soo kordheysa magaalada. Qolka hurdada ₪ 50. (la cusbooneysiiyay Agoosto 2020)
Homestay,. Waxaa suurtagal ah in lala joogo qoysaska magaaladii hore ee Xebroon. Qoysaskaas qaarkood waxay leeyihiin qolal dheeri ah oo badanaa kireysta martida. Safarrada sidoo kale waa la diyaarin karaa.
Hoteelka Al-Amanah (Hotel Hebron), Wadada Ein Sarah (5 daqiiqo u jirta bartamaha magaalada “Bab El Zawyieh”),. Waxaad ka hubin kartaa maamulka hudheelka ku saabsan helitaanka qolalka iyo qiimaha
Abu Mazen Hotel, Wadada Namera,. Laga soo bilaabo ₪ 216.
Hoteelka Queen Plaza, Ainsara,. Laga soo bilaabo ₪ 280.
Nabdoonow oo iska ilaali khiyaanooyinka Xebroon
Waxay umuuqataa inay jiraan “hagayaal” badan oo hareeraha socda, iskuna dayaya inay soo qabtaan dalxiisayaasha iyagoo ku saleynaya sadaqo ama dhaqdhaqaaq siyaasadeed, iyagoo ku tusaya sawirada reer galbeedka kale ee ay u maleynayeen inay lashaqeeyeen. Xitaa waxay kugula talinayaan inaad tahay Yuhuudi haddii aadan u sheegin dhalashadaada, oo laga yaabo inay noqdaan kuwo riixaya oo weydiisanaya lacag.
Dabeecaddan la midka ah waxay ka tagaysaa shaki xoogaa ah inay dhab ahaantii u taagan yihiin waxa ay sheeganayaan. Haddii aadan kaliya doonaynin in lagu dhibaateeyo, u sheeg inaad halkaan hore u joogtay oo aadan xiisaynayn markan. Adkee, wax cabsi ah kama qabtid nimankan. Xebroon waa hubaal inay tahay meel aad u siyaasadeed, laakiin waa inaad adigu iskaa u go'aansataa inaad tallaabo qaadayso iyo in kale.
Guud ahaan, ka feejignow hagayaasha aan rasmiga ahayn, kuwaas oo badiyaa isku dayi doona inay kaa kaxeeyaan hal meel oo aad u aadeyso meesha kale ee laga yaabo inaad wax ka iibsaneyso, si ay qaybtooda uga helaan milkiilaha dukaanka. Waxay xitaa si naxariis daro ah kuugu sheegi doonaan inay wax xiranyihiin ama ay qaadan karaan waqti aad u dheer (sida Kaniisadda Awoowayaasha), taas oo aan run ahayn, kaliya si loo hubiyo inaad waqti badan ku bixisay suurtagalnimada inaad lacag qarashgareyso. Waxaa fiican inaad isticmaasho hage joogto ah oo leh jadwal laysku raacay oo la sheegan karo.
Dad badan ayaa ka caga jiidaya inay yimaadaan Xebroon, maxaa yeelay waxaa u sheegaya milkiileyaasha hoteelada (tusaale ahaan Beytlaxam, sababo muuqda awgood) in Xebroon aysan ammaan ahayn. Si kastaba ha noqotee, Xebroon maahan amaan ka yar magaalooyinka kale ee Daanta Galbeed inta lagu jiro "waqtiyada nabadda". Sidoo kale, inaad tahay Yuhuudi ma tihid hanjabaad ama bartilmaameed, arintaas darteed, ama Falastiin kasta, waxaana suuragal ah in lagugu salaamo astaamaha "soo dhawow!" bartamaha magaalada. Si kastaba ha noqotee, qaar ka mid ah xaafadaha Falastiiniyiinta ee ku hareeraysan dejinta Kiryat Arba, dalxiisayaashu maahan dhacdo joogto ah waxaana laga yaabaa in tiro yar oo ka mid ah dadka maxalliga ah laga yaabo inay saaxiibtinimo yar yihiin, gaar ahaan haddii ay aaminsan yihiin inaad xiriir la leedahay dejinta.
Intaas waxaa sii dheer, xaalada gaarka ah waxay ka dhigeysaa mid qasab ah haddii aad rabto inaad waxbadan ka fahamto khilaafka Israa’iil ee Falastiin.
Meelaha ugu dhow ee caanka ah ee Daanta Galbeed, oo u oggolaanaya safar maalinle ah oo ka imanaya Xebroon, waxaa ka mid ah Godka Tor-Safa, Kaniisada Dhulka ee Taffuh, Qabriga Nebi Luud iyo Birkat al-Karmil (barkadda barakaysan).
Beytlaxam - Meeshii Baybalku ku dhashay ee Ciise iyo magaaladii Daa'uud.
Yeruusaalem - Marka laga soo tago Badda Dhimatay, waxay udub dhexaad u tahay inta badan dadka imanaya Israel.
Jericho - Waa mid ka mid ah degsiimooyinka ugu da'da weyn adduunka iyo Bariga Dhexe.
eHalal Safarka Mart > Safarka Xalaal ee Falastiin > Hagaha Socdaalka Xalaasha ah